Woesisi Ahendzi Asa Ama Adasefo 1,000,000 Wɔ Central America Nye Mexico
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Basque Batak (Toba) Bislama Catalan Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chol Croatian Czech Danish Dutch English (Borɔfo) Estonian Faroese Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hungarian Iban Indonesian Italian Japanese Javanese Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Mfantse Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele (Zimbabwe) Ngabere Norwegian Oromo Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Serbian Serbian (Roman) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tahitian Tankarana Thai Tigrinya Tsonga Turkish Ukrainian Urdu Valencian Welsh Xhosa Yoruba (Alata) Zulu
Ahendzi Asa Ahorow A Wosisi Ma Adasefo Ɔpepem Bi
Ofi afe 1999 dze kesi mfe 2015 mu no, Jehovah Adasefo sisii Ahendzi Asa bɔbor 5,000 wɔ Central America * nye Mexico. Naaso, wohia Ahendzi Asa bɔbor 700 akã dza ɔwɔ hɔ dada no ho na ama woeetum edzi Adasefo ɔpepem kor nye nyimpa afofor a wɔkɔ hɛn Christianfo nhyiamu daa wɔ dɛm amansin ebien yi mu no ehiadze ho dwuma.
Mfe bi a abɛsen kɔ no, nna ɔyɛ dzen dɛ asafo ahorow a wɔwɔ dɛm aman yi do no benya beebi ehyia mu asom. Dɛ nhwɛdo no, wɔ Mexico no, nna Adasefo no mu dodowara hyia mu wɔ enuanom binom hɔn efie mu. Ebɛnadze ntsi a? Siantsir kor nye dɛ mfe pii a abɛsen kɔ no, nna ɔman no ne mbra mma nyamesom ahyehyɛdze ahorow kwan dɛ wobenya egyapadze biara. Naaso, wɔ afe 1990 no mu no, wɔsesãa mbra no, na Jehovah Adasefo hyɛɛ ase sisii Ahendzi Asa ahorow pii. Iyi nyinara ekyir no, nna mpɛn pii no, asa kor biara ne si dzi abosoom dodow bi.
Nhyehyɛɛ A Otu Mpon
Ndzɛmba sesãe wɔ afe 1999 no mu aber a wɔtseew Ahendzi Asa Nsii Ekuw no. Iyi yɛ nhyehyɛɛ a wɔyɛɛ dɛ wɔdze besisi Ahendzi Asa ahorow wɔ aman a afei na worutu mpon no do, a Mexico nye aman ahorow esuon a wɔwɔ Central America so kã ho. Ofitsi mfe 2010 reba no, hɛn edwumayɛbea a ɔwɔ Mexico no ahwɛ ma woesisi Ahendzi Asa ahorow wɔ dɛm aman ahorow yi nyina do.
Hɔn a wosisi Ahendzi Asa ahorow wɔ mbea a atsew no ho no hyia nsɛndzendzen ahorow pii. Dɛ nhwɛdo no, wɔ Panama no, nna ɔwɔ dɛ adansifo dze hɛmba twa nsu bɛyɛ ndɔnhwer ebiasa dze kɔ beebi a worikesi Ahendzi Asa no. Bea bi a wɔfrɛ hɔ Chiapas wɔ Mexico no, nna ɔwɔ dɛ adansifo no dze wimhɛn ketseaba bi twe adansi ho ndzɛmba no kɔ bea bi a atsew no ho koraa.
Mfaso A Ofi Ahendzi Asa Ahorow A Wosisi Mu Ba
Mpɛn pii no, hɔn a wɔnnyɛ Adasefo mpo enyi gye ber a woesi Ahendzi Asa fofor wɔ bea a wɔtse no. Dɛ nhwɛdo no, ɔbarimba bi a ofi Honduras kãa dɛ ansaana Adasefo no ribesi Ahendzi Asa no, nna nyimpa binom pɛ dɛ wɔgye asaase no dze si dan a nkorɔfo bɛgye hɔn enyi wɔ mu. Naaso, ɔammpen do. Aber a Jehovah Adasefo kãa kyerɛɛ no dɛ wɔpɛ dɛ wɔgye asaase no dze si Ahendzi Asa no, ɔbarimba no dze enyigye tsẽaa mu dɛ: “Nhyira bɛn ara nye yi!”
Mbea ahorow pii no, nkorɔfo enyi gye nsi nye ahokẽka a edwumayɛfo no dze si Asa no ho. Ɔbarimba bi a ofi Guatemala kãa dɛ: “Wɔ hɛn amambra mu no, mbaa yɛ edwuma wɔ gyaadze nkotsee. Naaso, mbaa a wɔwɔ ha yi nye mbanyimfo no reyɛ edwuma kor. Moho abow me dɛ mehu dɛ mbaa rehyehyɛ ndadze a wɔdze yɛ ntokura, na wɔresɛmɛntse dan ho. Iyi yɛ nwanwa araa yie!” Adansi edwuma yi tum kenyan nyimpa binom a wɔtsetse mbea a worisisi Asa no ma wɔtɔ edziban nye anondze ma adansifo no.
Bio so, nyimpa pii enyi gye kwan a yɛfa do sisi hɛn Ahendzi Asa ahorow no ho. Obi a ɔakwadar wɔ adansi mu kãa kyerɛɛ aban ananmugyinanyi bi a ɔhwɛ kurow bi do wɔ Nicaragua no dɛ, Ahendzi Asa a Adasefo no esi wɔ kurow no mu no yɛ fɛw papaapa, na ndzɛmba a odzi mu na wɔdze sii. Nokwasɛm nye dɛ, ɔkyerɛɛ dɛ Asa no dzi mu sen dan fofor biara a woesi wɔ kurow mu hɔ!
Nokwasɛm nye dɛ, Jehovah Adasefo enyi gye ho dɛ wobenya beebi a hɔ yɛ ahomka asom Nyankopɔn. Woebohu dɛ Bible esuafo enyi gye ho dɛ wɔbɔkɔ nhyiamu a wɔyɛ no bi ber a woesi Ahendzi Asa fofor ewie no. Adasefo bi a wɔwɔ asafo bi mu wɔ Mexico nyaa ho kwan kɔboaa Ahendzi Asa nsii edwuma no bi. Asɛm yi na wɔkãe dze kyerɛɛ hɔn enyisɔ: “Yɛda Jehovah ase wɔ ho kwan a yenyae dze sii Ahendzi Asa a ɔhyɛ ne dzin enyimnyam no.”
^ nky. 2 Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11th Edition dze no, kã dɛ aman a wodzidzi do yi na wɔka bɔ mu yɛ Central America: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, nye Belize.
Jehovah Adasefo Ahendzi Asa Ahorow​—Ebɛnadze Ntsi na Wosisi, na Ɔkwan Bɛn Do na Wosisi No?
Ebɛnadze ntsi na yɛfrɛ mbea ahorow a yɛsom no Ahendzi Asa? Hwɛ mbrɛ dɛm adan ahorow a ɔnnyɛ kuntann yi boa hɛn asafo ahorow no.
Woesisi Ahendzi Asa Ahorow 3,000 Ewie Wɔ Nigeria
Woesisi Ahendzi Asa Apem Na Worisi Bi Akã Ho
Ahendzi Asa Ahorow A Wosisi Wɔ Mbea A Atsew No Ho